2022 Mac Pro wuxuu sii wadi doonaa inuu yeesho processor Intel ah. Waxaan ka socdaa mac
Qolka Ignatius | | Mac Pro, Xanta
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira cusboonaysiinta muddada dheer ee Mac Pro waxay soo jeedinayaan in Apple sii wadi doona inuu ku aamino Intel processor-ka Xeon W-3300 iyada oo wali lagu shaqeynayo processor-ku lahaansho kaas oo istaagi kara waxqabadka.
Warkani wuxuu ka yimid khariidad la aqoonsan yahay oo la yiraahdo YuuKi_AnS, macluumaadka kaliya xaqiijinaya daadashada kale, iyo inay tagaan ka soo horjeedka ballanqaadka Apple ee ku-beddelashada dhammaan Mac-yada.
Apple's MacPro 2022 wuxuu umuuqdaa inuu adeegsado Intel's Xeon-W 33xx processor taxane series
- 结 城 安 穗 -YuuKi_AnS (@yuuki_ans) July 26, 2021
WCCFtech sidoo kale waxay tilmaamtay jihadaas toddobaadyo ka hor. Waqtigan la joogo lama oga haddii Apple ay soo saari doonto oo keliya Mac Pro oo ay maamusho Intel Xeon W-3300 ama sidoo kale wuxuu bilaabi doonaa nooc uu maamulo processor taxane M ah si loo daboolo tirada ugu badan ee xirfadlayaasha ah.
Processor-ka fulin doona noocyada soo socda ee Mac Pro waxaa loo yaqaan Jade ama M1X, oo ah processor kaas waxay lahaan laheyd ilaa 40 diirkja oo ay kujiraan sawiro qaas ah. Sanduuqa nooca 'Mac Pro' ee uu maamulo processor-ka M1X wuxuu noqon doonaa kalabar cabbirka nooca hadda jira.
Apple waxay damacsan tahay inay u adeegto macaamiisha kuwaas oo ku tiirsan qalabka dhaxalka iyo qaybaha leh Intel Pro-based Mac Pro, maadaama haddii kale ay ka hor imaaneyso bulshada sida weyn ugu kalsoon kooxaha ugu xirfada badan. Qaabkan xanta ah wuxuu la jaan qaadayaa qaybaha qaabdhismeedka ah iyo GPU-yada dibedda ee xirfadleydu u baahan yihiin iyo hadda
Waxa u muuqda inay cadahay ayaa ah in sanadkaan ay u badan tahay intaas yeynaan filanin cusbooneysiin ku saabsan heerka Mac Pro. Xanta sidoo kale waxay u badan tahay inay khaldan tahay. Bisha Sebtember waxaan ka tagi doonaa shaki.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » 2022 Mac Pro wuxuu wali lahaan doonaa processor Intel ah
Haddii aad isticmaasho barnaamijka Apple Mail oo aad rabto inaad ilaaliso, adeegso adeegga cusub ee DuckDuckGo